Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment आज घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो? - Pnpkhabar.com
आज घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो?
काठमाडौँ, २० मङ्सिर : नेपाली बजारमा आज (बिहीबार) अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार अमेरिकी डलरको भाउ ५ पैसाले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैँकले तोकेको विनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डरलको खरिददर मूल्य १ सय १२ रुपैयाँ ४४ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिंगिटको खरिददर मूल्य २७ रुपैयाँ ७ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ २१ पैसा छ। त्यस्तै आज यूके पाउण्डको खरिददर १४३ रुपैयाँ ६६ पैसा छ भने बिक्रिदर १४४ रुपैयाँ ४३ पैसा छ।
एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १३ पैसा छ। त्यस्तै, एक कतारी रियाल खरिददर ३० रुपैयाँ ८८ पैसा र विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ५ पैसा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमय दर विस्तृतमा तल